‘काम गर्न सक्ने मान्छे भनेर मलाई चिन्छन्’ « Loktantrapost
‘काम गर्न सक्ने मान्छे भनेर मलाई चिन्छन्’
२७ पुष २०७५, शुक्रबार ०७:३४
पुस २८ गते हुने मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा नेकपा, सङ्घीय समाजवादी पार्टी र लिम्बुवान पार्टीको साझा व्यावसायिक प्यानलको नेतृत्व गर्दै धुलावारीका ऋषिराज तिम्सिना अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार बन्नु भएको छ । उहाँसँग लोकतन्त्र पोस्टका मोहन काजी र प्रकाश पौडेलले लिएको चुनावी अन्तरवार्ता प्रस्तुत छ–
अध्यक्षको टिकट पाउन निकै सजिलो भयो ? दावेदार त अरु कोही निस्किएनन् नि । किन होला ?
व्यावसायिक क्षेत्रमा अगाडि छस् भनेर पार्टीले मलाई महासचिव पदमा पठाएको थियो । बितेको कार्यकालमा अध्यक्ष पदमा सहमतिबाटै जो आउनु भएको थियो, उहाँको गतिविधि साह्रै सुस्त भयो । अब अध्यक्ष पदमा सक्रिय नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने आवाज सबैतिर व्यवसायीले उठाएपछि मैले नै कुशलतापूर्वक त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छु भन्ने सोेचेर मलाई अहिले अध्यक्ष पदमा निर्विवाद उम्मेद्वार बनाइएको छ । मैले सहजै टिकट पाएँ ।
नेकपासँग वैचारिक निकटता राख्ने तपाईको नेतृत्वमा रहेको साझा व्यावसायिक प्यानललाई नै जिताउनु पर्ने किन ?
मुख्य कुरा त एउटा वैचारिक समूहले २१ वर्षसम्म मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई हाँकेर ल्याएको थियो । यो अवधिमा व्यवसायीहरुले सङ्घमा आत्मीयपन महसुस गर्न सकेनन् । अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै देशलाई हाँकिरहेको एउटा ठूलो शक्ति नेकपा हो । नेकपासँग वैचारिक निकटता भएको कारण हाम्रो व्यावसायिक प्यानलले यस संस्थालाई राम्ररी हाँक्न सक्छ भन्ने विश्वास सबैलाई छ । पुरानो विचारको नेतृत्वलाई विस्थापन गर्दै हाम्रो नेतृत्व स्थापित गर्न साझा प्यानललाई जिताउन म अपिल गर्दछु ।
पहिलेको चुनावहरुमा अन्तिम समयमा आएर फर्जी सदस्य थप्ने गरिन्थ्यो, त्यसलाई यसपाली हामीले रोकेका छौँ । पैसा हालिदिएर सदस्यता नविकरण गरिदिने र भोट हलाउने पुरानो चलन यसपाली छैन । असली व्यवसायीहरु मात्र योपटकको चुनावमा मतदाता हुनु भएको छ । यसपाली १३७६ जना मतदाता हुनुहुन्छ । मतदाताको सङ्ख्या कम हुनु र सच्चा व्यवसायी मात्र मतदाता भएको हुँदा हामीले चुनाव जित्ने पहिलो आधार बनेको छ ।
अहिलेसम्म वाणिज्य सङ्घमा आएको सुस्तताबाट दिक्क भएका व्यवसायीहरुले मेरो नेतृत्वमा रहेको प्यानलले संस्थालाई गतिशील बनाउन पक्कै सक्छ भन्ने विश्वास गरेका छन् । हामीलाई चुनाव जिताउने यो दोस्रो कारण हो ।
व्यवसायी माझमा म इमान्दार युवाको रुपमा चिनिएको छु । यसले तलमाथि गर्दैन, त्यहाँ पदमा गएर कुनै लाभ लिदैन, आम व्यवसायीको हितमा काम गर्दछ भन्ने सबैको सोचाई छ । यो पनि हामीलाई चुनाव जिताउने अर्को आधार हो ।
अरु नै थुप्रै संस्थामा व्यस्त भएर अहिलेका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्वाङले खासै समय दिन नसकेको व्यवसायीहरुकै गुनासो सुनिन्छ । तपाई पनि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, समय दिनु होला त ?
व्यवसाय बाहेक अन्य संस्थामा म अहिले खासै सक्रिय छैन । व्यवसायमा अलि बढी समय दिइरहेको छु । व्यवसायमा समय दिएरै म वाणिज्य सङ्घका लागि पर्याप्त समय निकालिरहेको छु । महासचिव हुँदा सबैभन्दा बढी सक्रिय रहेर सङ्घको कार्यक्रमहरुमा म लागेको सबैलाई थाहै छ । म दैनिक रुपमा वाणिज्य सङ्घमा पुगेको छु, कुनै पनि कार्यक्रम छुटाएको छैन । अझ संस्थाकै अध्यक्ष बनिसकेपछि त बढी जिम्मेवारी बोधका साथ समय दिने छु । सबै कुरा छाडेर पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्न समय दिने छु ।
धुलावारी बजार खोलो सुकेपछिको उजाड बगर जस्तो अवस्थामा छ । यसलाई हराभरा बनाउने के योजना छ ?
कुनै बेलाको मुलुककै चर्चित बजारको रुपमा चिनिएको हङकङ मार्केट भनिएको धुलावारीलाई नयाँ स्वरुपमा लैजाने र यहाँको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाउने हाम्रो योजना छ । पब्लिक ट्वाइलेट बनाउने, पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने र व्युटिफिकेसन गरी हरियाली बनाउनु पर्ने खाँचो छ । हामी पहिलेको भन्दा पनि हराभरा बनाउने छौं धुलावारीलाई ।
धुलावारी बजार हराभरा बनाउनका लागि बर्नेसम्मको सडक कालोपत्रे गराउने छौं । भद्रपुर एयरपोर्ट जोड्ने सडक पीच गराउने छौं । केन्द्र र प्रदेशमा हाम्रै नेतृत्वको सरकार भएकाले त्यहाँ पहल गरेर ठूला योजना ल्याउने छौं । ठूला योजना ल्याउन हामी बाहेक अरुले सक्दैनन् ।
काँकरभिट्टा, चारआली, इटाभट्टाका व्यवसायीहरुको समस्या के कस्तो पाउनु भएको छ ? समाधान के होला ?
काँकरभिट्टा नेपालकै प्रवेशद्वार हो । त्यहाँबाट पर्यटकहरु भित्रिन्छन् भने हाम्रो व्यापार त्यहीबाट हुन्छ । आयात र निर्यातमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । भूटान, बङ्गलादेश र इन्डियासँग यहीँबाट व्यापार हुने भएकोले हामीले व्यवसायीको हितमा धेरै काम गर्नु पर्ने छ । सीमा नाकामा नेपाल र इन्डियाका प्रहरीले समान किनेर लैजाँदा र ल्याउँदा अनावश्यक दुःख दिने गरेका छन् । हामी त्यो समस्या तत्काल समाधान गर्ने छौँ ।
चारआली, इटाभट्टा, धाइजन, बाहुनडाँगी र ज्यामिरगढीमा समेत बजार व्यवस्थित गर्नु पर्ने छ ।
सुरक्षाको हिसावले प्रत्येक चोक बजारमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने छौँं । बजारलाई सुरक्षाको हिसावले मजबुत र व्यवस्थापनको हिसावले सुन्दर बनाउने हाम्रो योजना छ ।
यस अघि स्थानीय व्यवसायीहरुको हितमा तपाईले के कस्ता कामहरु गर्नु भएको छ ?
संस्थाको महासचिव भएको नाताले मैले सबै समय व्यवसायीको हितमा लगाउँदै आएको छु । कर सम्बन्धी, बजारमा आउने गरेका समस्याहरु, घरधनीहरुसँग हुने विवादका विषयमा मैले जहिल्यै पनि व्यवसायीको पक्षमा हित हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु । आयात निर्यातमा आउने समस्या समाधान गर्न मैले प्रत्यक्ष पहल गर्दै आएको छु । जुनसुकै बेला पनि व्यवसायीलाई समस्या पर्दा हाजिर हुने गरेको छु । यो त म आफैले भन्नु भन्दा पनि व्यवसायी साथीहरुलाई सोध्दा थाहा भइहाल्छ ।
आम मतदाताको चाहना र भावना कस्तो पाउनु भएको छ ? त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
पुरानो शैलीमा चलिरहेको वाणिज्य सङ्घमा नयाँ र जुझारु नेतृत्व ल्याउनु पर्छ भन्ने आम मतदाताको चाहना र भावना मैले पाएको छु । नयाँ युवालाई यो पटक नेतृत्व प्रदान गरौं, यसले पक्कै पनि केही न केही राम्रो र फरक महसुस हुने गरी काम गर्छ भन्ने आम व्यवसायीको धारणा रहेको छ ।
देशमा नेकपाको जगजगी छ । व्यावसायिक जगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको जगजगी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक समर्थनको हिसाबकिताब कस्तो होला भन्ने सोच्नु भएको छ ?
देशका अरुतिर व्यावसायिक क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको अग्रता होला, तर मेचीनगरमा फरक परिवेश छ । विगतमा फर्जी मतका कारण भिन्न परिणाम आउँथ्यो, यसपाली त्यस्तो हुँदैन । काङ्ग्रेसमै आस्था राख्ने अधिकांश साथीहरुले मलाई नै रुचाउनु भएको छ । मलाई भोट हालेर जिताउने भनिरहनु भएको छ । जगजगी जताको भए पनि मलाई काङ्ग्रेसकै पर्याप्त मत आउने छ । पार्टीगत भन्दा पनि माथि उठेर काम गर्ने मान्छे हो भनेर मलाई आम व्यवसायीहरुले चिन्नु हुन्छ । गफ होइन, काम गर्न सक्ने मान्छे हो भन्ने उहाँहरुको ठम्याइ छ ।
अध्यक्षका अर्को उम्मेद्वारसँग प्रतिष्पर्धा कस्तो हुने र कति मत आफुले पाउने अनुमान गर्नु भएको छ ?
मसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहनु भएको आदरणीय पुनित दाइ मजस्तै धुलावारी जेसीजको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मसँग प्रतिष्पर्धा गरे पनि म उहाँभन्दा हरेक काममा अलि अगाडि नै छु । यसपाली मेरो पक्षमा आएको लहर हेर्दा अलि धेरै नै मतले म उहाँभन्दा अगाडि हुने छु ।
चुनावमा कति जति खर्च होला जस्तो अनुमान गर्नु भएको छ ? भन्ने आँट गर्नु हुन्छ कि !
व्यवसायीको चुनाव अलि खर्चिलो त हुने नै रहेछ । पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । मैले नै बोर्डमा रहँदा चुनाव प्रचारको अवधि छोटो राखेको कारण खर्च एकदमै न्यून हुने छ । एक वा डेढ लाख रुपैयाँमा अध्यक्षको चुनाव सकिन्छ जस्तो छ ।